Indonezia : Ady manodidina ny fanànana ara-tsaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2018 11:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, polski, English
Vao haingana, namoaka ny tatitra isantaonany ny Departemanta amerikana misahana ny varotra (US Trade Representative / USTR), ny Special 301, fandinihana ny fahamatoran'ireo mpiara-miombon'antoka aminy mba hanombanana indray ny fanajana ny zon'ny fananana ara-tsaina, amin'ny alalan'ireo lalàna isan-karazany ao amin'ny firenena.
Asehon'ny The Jakarta Globe [amin'ny teny anglisy] ny ahiahin'ny Fanjakana manoloana ity fampidinana ity, amin'ny alalan'ny fanehoankevitr'i Mari Elka Pangestu, Minisitry ny varotra .
Mihevitra i William, ao amin'ny blaoginy Etersoul [amin'ny teny bahasa] fa tokony hijanona ao amin'ny lisitra mainty i Indonezia.
Mamoaka fandrabirabiana momba ity fampidinana sata ity ny Creativesimo, blaogina vondrom-piarahamonina iray [amin'ny teny bahasa]:
Miharihary amin'ny famoronana toerana ho anà Tale jeneralin'ny zon'ny fananana ara-tsaina eo anivon'ny Ministeran'ny fitsarana sy ny zon'olombelona ao amin'ny Repoblikan'i Indonezia ny finiavan'ny fanjakana indoneziana hanafoana ny fanaovana hosoka. Fa mbola marefo ny fahaizan'ny polisy amin'ny resaka fahitana ireo rindrambaiko tratry ny hosoka [amin'ny teny indoneziana].
Manamarika ny fanokafana ny Akademia indoneziana voalohany indrindra ho an'ny zon'ny fananana ara-tsaina ity volana Mey ity. Noforonina tamin'ny fiarahana niasa tamin'ny fanjakana japoney ilay sekoly miorina ao Depok, ao Java Andrefana, tamin'ny alalan'ny Sampandraharaha misahana ny Fiarahamiasa Iraisam-pirenenan'i Japana (JICA)..